विदेश हिडेका श्रीमानको रेलले खुट्टा छि’नायो ! छोराको पर्खाइमा दम्पति, रुँदा रुँदै सकियो अन्तरबार्ता (भिडियो सहित)
काठमाडौँ : शारीरिक रुपमा अशक्त पेमा दोर्जे तामांगले आज भन्दा १२ बर्ष पहिला दुवै खुट्टा गुमाएका थिए । अहिले उनी मुडाको सहाराले हिडडुल गर्ने गरेका छन् । रोजगारीको सिलसिलामा विदेश जान भनि भारत जाँदा रेलबाट खसेर खुट्टा गुमाएका तामांग अहिले आफु र श्रीमती सरिता पाख्रिनले डेढ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर गोदावरीमा बाख्रा पालन गर्दै आइरहेका छन् ।
भारतमै अरुबाट जुटेको सहयोगले उपचार गरेर १ बर्षपछि फर्केपछि यहि ठाउँमा पहिला कुखुरा पालन गरेका यी दम्पत्तिले कुखुराबाट घाटा भएपछि अहिले बाख्रा पालन गरिरहेका छन् । ७२ सालको भूकम्पपछि आएको १०/१० हजार राहतको पैसाले ३ वटा बाख्राबाट सुरु गरेका उनीहरुसँग २५ वटा बाख्रा थिए तर रोग लागेर ६ वटा बाख्रा मरेपछि अहिले १५ वटा बाख्रा मात्र छन् ।
बार्षिक २५ हजार भाडा तिर्दै आएका उनीहरुले अहिले भने रकम तिर्न धौधौ भएको बताए । बयरको ठिमाहा जातको बाख्रा पालिरहेका उनीहरु बर्खाको समय भएकाले अहिले घाँस भएको तर घाँस नभएको खण्डमा केरा ल्याएर दिने गरेको बताउछन् ।
पहिला फूटपाथमा रेडीमेड मोजा बेच्ने गरेको तर अहिले लकडाउनका कारण केरा ल्याउन समस्या हुँदा भाडाको जग्गामै चराउने गरेको बताए । भूकम्पले घर भत्किएपछि अहिले टहरा बनाएर बसीरहेका छन् यी दम्पत्ति ।
एक छोरका बाबुआमा पेमा र सरिताको बिहे भएको ३० बर्ष भयो । तर हुर्केको छोरा आफुसँग नबस्ने उनीहरुले बताए । कति दुख र संगर्ष गरेर यो स्थानसम्म आइपुगे तर अहिले श्रीमानको यो अवस्था र छोरा आफुसँग नबस्ने दुखेसो पोख्दै, छोरालाई आमा बाबु भन्न पनि लाज लाग्छ होला भन्दै सरिता धर धरी रोईन् ।
पेमा भन्छन्, परिवार र छोराको भबिष्यका लागि बिदेशिन लाग्दा आफ्नो अवस्था यस्तो भयो तर अहिले यस्तो अवस्थामा छोराले वास्ता गर्दैन, के गर्नु ? अरु बेला मुडाको सहाराले घरमा यताउता गर्ने गरेपनि गाडीमा चड्दा भने व्हिल चियरमा हिड्ने गरेको सुनाउदै आफुलाई अरुले हेप्ने गरेको गुनासो गरे । भन्छन्, आफु अपाङ्ग भएर होला अरुले आफुप्रति गर्ने व्यवहारले चित्त दुख्छ । यी बुवा आमाको दुख र संघर्षको कथा बिस्तृतमा पुरा भिडियोमा हेरौं ।